★မြန်မာ့အလင်း★: ကိုလိုနီခေတ်က ကောင်းတယ်ဆိုပဲ
ကိုလိုနီခေတ်ဆိုတာ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးက အုပ်ချုပ်တဲ့ကာလပေါ့။ မြန်မာတွေက အဖြူတွေကို သူတော်ကောင်းတွေလို့ ထင်နေပါတယ်။ တချို့လူငယ်တွေက ကိုလိုနီခေတ်က နအဖခေတ်ထက်ပိုပြီး ကောင်းတယ်ဆိုပြီး မရှက်မကြောက် ပြောဆိုမှုတွေရှိကြပါတယ်။ ကိုလိုနီခေတ်မှာ ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့လည်းဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ပါဘူး။ သမိုင်း အထောက်အထားတွေကလည်း အားကိုးလို့မှ မရတာ။ ကိုလိုနီခေတ်အခြေအနေကို ခန့်မှန်းဖို့ အထက်က ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။ ဗီဒီယိုကင်မရာတွေရှေ့မှာ အဖြူတွေဟာ မူရင်း ဒေသခံ Indians တွေကို အုတ်ခဲကြီးတွေနဲ့ ကြောက်ခမန်းလိလိ ပစ်ပေါက်နေတာပါ။ ကနေဒါဒီမိုရဲတွေဟာ ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်ထက် မပိုပါဘူး။ ၀င်ရောက်ဟန့်တားမှု မရှိပါဘူး။ အခုနအဖခေတ်ကြီးမှာ တိုင်းပြည်စည်းလုံးမှုပြိုကွဲနေတဲ့အချိန်မှာတောင် ဗမာတွေက ဘယ်သူ့ကို အဲလိုလုပ်တာရှိပါသလဲ? (အဲလိုပြောလို့ ရှမ်း၊ ကရင်၊ ကယား၊ ရခိုင်တွေက ဗမာတွေကို လုပ်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ) ကိုလိုနီခေတ်မှာ ကင်မရာတွေမရှိ . . . လူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်လည်းမရှိတဲ့ အချိန်မှာတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေကို (ကချင်၊ ကရင်၊ ရှမ်း၊ မွန်၊ ကယား၊ ရခိုင်၊ဗမာ အားလုံးကို ဆိုလိုသည်) အဖြူတွေက ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုပဲ… . . . . ..
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 4:40 AM
Dont Inject Me the Swine Flu Vaccine
palaung, nam san song by ဒီရိင် ပလေမျံမ်း တအင်းဆဲင...
The Swine Flu Scam - AVOID THE VACCINES!
Our Spirits Don't Speak English. Native American D...
သတိ . . . မွတ်ဆလင်မ သတင်းကြေငြာနေသည်။ မျက်နှာကိုပဲ...
Witness to murder at Indian Residential School
မိုက်မဲတဲ့ အဖြူမလေးရဲ့ နောင်တ
Indian Boarding School Abuse
တောင်းတဲ့ဆုမပြည့်ရင် Allah ကို ကျေးဇူးတင်ပါ။ ဒန်.....
ကိုလိုနီခေတ်က ပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောတဲ့ ရူးကြောင်ြေ...
Karenni - Loikaw (TaungKwe ZeDi)
အမေရိကန်က ကုလားကိုချနေချိန် ကျုပ်တို့က စဉ်းစားရမည်...
အာဖရိကမှာ မွတ်ဆလင်ပျောက်ကွယ်တာကို အားကျပါ